नेपाली कांग्रेस – doodhmati || dudhmati
Home / Tag Archives: नेपाली कांग्रेस
December 26, 2018	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस ११ । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसारको पार्टी विधान बनाएको नेपाली कांग्रेसले टोलदेखि केन्द्रीय तहसम्म गरी आठ तहमा आठवटा कार्यसमिति बनाउने भएको छ ।आइतबार मात्रै महासमिति बैठकबाट पारित विधानअनुसार टोलदेखि केन्द्रीय तहसम्म गरी आठ तहमा आठवटा कार्यसमिति हुने भएको हो । नेता रमेश लेखकले टोलबाट केन्द्रसम्म गरी अब …
कांग्रेसमा सहमति: सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री सबै निर्वाचित हुने
December 22, 2018	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस ७ । नेपाली कांग्रेसले विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र सात सहमहामन्त्री राख्ने गरी सहमति गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने छ। कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा …
September 4, 2018	news, समाचार 0
प्र. जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बढाएको कर विरुद्धको आन्दोलन कहाँसम्म पुगेको छ ? नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि लिएर प्रत्येक वडा कार्यालयमा दुई दिन धर्ना कार्यक्रम गरिसकेका छौँ । जनतालाई परेशान गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरेको कुरो आमजनमा हामी बुझाई सकेकाछौँ । अब जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा धर्ना लगायत अन्य बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने छौँ । यसका …
March 23, 2018	बातचित 0
प्र. जनकपुरको कामकाजप्रति नेपाली कांग्रेस किन मौन देखिएको छ ? हामी मौन छैनौँ । नगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह कसरी कार्य अगाडी बढाई रहेका छन त्यसको प्रतिक्षा गरिरहेका थियौँ तर भिजन नै नभएका व्यक्तिले जनकपुरको समस्याहरु समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । शुरुमै हामीले बिरोध गरेको भए कामै गर्न दिएन आरोप …
कांग्रेसले छान्यो राष्ट्रियसभाका थप ६ उम्मेदवार, राधेश्याम र जितेन्द्र देव पनि अटाए
January 24, 2018	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, माघ १० । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्यका थप ६ उम्मेदवार तय गरेको छ । उसले राधेश्याम अधिकारी र जितेन्द्र देवलाई टिकट दिएको छ । फोरमबाट एकतामा आएका मन्त्री देवलाई प्रदेश २ को खुला सदस्यको उम्मेदवार बनाइएको छ । अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीलाई भने प्रदेश ३ …
प्रदेश सभाको समानुपातिकमा कांग्रेसका ७२ मध्ये ३७ महिला सांसद
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस १६ । नेपाली कांग्रेसले बुझाएको प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदमा ३७ महिला परेका छन्। सात प्रदेशमा गरेर उसले समानुपातिक तर्फ ७२ सिट जितेको थियो। प्रदेशनम्बर १मा १३ सिट जितेको थियो। जसमा ६ जना महिला परेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ ११ सिट जितेकोमा ७ …
रघुवीर र राजेन्द्रको नयाँ गठबन्धनका कारण धनुषा ३मा कांग्रेसलाई पराजय ब्यहोर्नु पर्योःजीवनाथ चौधरी, युवा नेता नेपाली कांग्रेस
December 12, 2017	बातचित 0
प्र. नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित हुनुको कारण तपाईहरुलाई के लागि रहेको छ ? मतको हिसाबले हामी जितेका छौँ । कांग्रेसको जति मत थियो त्यो आएकै हो । तर जनकपुरमा नयाँ गठबन्धनले हामीलाई असर पार्यो । वाम गठबन्धन र मधेशवादी मिलेका कारण यस्तो अवस्था …